TÜBİTAK 9 Waxay qoreysaa Shaqaale joogta ah | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaTÜBİTAK wuxuu qoraa 9 Shaqaale Joogto ah
06 / 05 / 2020 Shaqooyinka, GUUD
TÜBİTAK wuxuu qortay 9 shaqaale joogto ah oo ka shaqeeya Kocaeli. Shuruudo gaar ah ayaa looga baahan yahay codsadayaasha. Codsiyada waa in la sameeyaa ugu dambayn Maajo 27, 17.00:XNUMX ugu dambayn. Codsiyada lama aqbalo, marka laga reebo codsiyada lagu sameeyo "Nidaamka Codsiga Shaqada".
Shuruudo guud oo lagu raadin karo shuruucda
a) In laga mamnuuco xuquuqda dadweynaha.
b) Xaq uma lihin ka-qeybgalka wareysiga inta ay la egtahay tirada ogeysiisyada la tiriyay ee loo yaqaan 'TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-2 iyo TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3.
c) Inaad qabin cudurka ama cudurada faafa ee ka horjoogsan kara inuu si joogto ah u guto waajibaadkiisa.
d) Marka laga reebo dambiyada dayaca, dambiyada loo rogay cunaqabateyn kale oo xabsi gaaban ah iyo qodobo dib-u-dhac ah oo aan ahayn kuwa hoos ku taxan; Xitaa haddii lagu xidho in ka badan lix bilood ama cafis, waxay la kulmaan aflagaaddo, khiyaano, laaluush, xatooyo, xatooyo aqoon leh, khiyaanooyin, khiyaano, ku-xadgudbid aamin, tuugnimo been-abuur, khayaano, ama khayaano, aan lagu xukumin dambi ama tahriibin, been ka sheegis hindisooyin rasmi ah iyo ganacsi, muujinta sirta shaqada, dambiyada ka dhanka ah sirta dowladda. La'aan lahaanshaha xubinnimada, ku xirnaanshaha ama xiriirinta qaab dhismeedka, qaabaynta ama kooxaha gudaha baaxadda Xeerka No. 667 ama qaab-dhismeedka, qaabaynta ama kooxaha go'aamiyay Golaha Amniga Qaranka inuu ka hortago amniga qaran ee Gobolka.
e) Musharixiinta waa iney lahaadaan ugu yaraan celceliska qalin jabinta 4,00 marka loo eego 2,50. (Beddelka celceliska buundada darajooyinka murashaxiinta ee nidaamkooda heerka jaamacadeed ku jira nidaamka 100 iyo nidaamka 4, Shaxda Shahaadooyinka Fasalada ee Nidaamka 4 ee Nidaamka 100 ayaa la adeegsan doonaa).
a) Si aad u dalbato xayeysiiska “www.bilgem.tubitak.gov.t waaWaxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso Nidaamka Codsiga Shaqada. (Markaad samaynaysid CV-ga dalabka, dhammaan dokumentiyada loo baahan yahay waa in lagu daro nidaamka si elektiroonig ah codsina waa in lagu sameeyaa xulashada koodhka tixraaca). Codsiyada lama aqbali doono marka laga reebo codsiyada lagu sameeyo Nidaamka Codsiga Shaqada.
b) Codsiyada waa in la soo gudbiyaa ugu dambeyn 27:05 ee 2020/17/00.
d) Sida ku xusan qeybta (e) qeybta “Xaaladaha Guud ee lagu Raadinaayo Musharixiinta”, 10 jeer tirada shaqaalaha laga qoro dhibcaha ugu sareeya waxaa loogu yeeri doonaa wareysi. Haddii ay jiraan murashixiin kale oo leh isla dhibco kuwii musharraxii ugu dambeeyay, waxaa loogu yeerayaa wareysiga.
e) Murashaxiinta waxaa loo qiimeyn doonaa iyadoo loo eegayo caddeynta ay ku soo galeen nidaamka arjiga shaqada inta lagu gudajirayay codsigooda iyo haddii macluumaadka la galay ay khaldan yihiin ama mid ka mid ah dukumiintiyada soo socda ay maqan yihiin, dalabka waxaa loo qaddarin doonaa mid aan ansax ahayn.
CV-ga hadda jira (CV-gaaga waa in lagu diyaariyo sawirro midab leh, oo ay ku jiraan turkiga, Aqoonsiga Turkiga iyo lambarrada taleefannada)
Shahaadada la xiriirta ama Shahaadada Ka bixida.
Shahaadada YÖK Alumni Shahaadada (daabacaadda internetka ee leh e-dowladda iyo koodka xakameynta).
Dukumentiga Shaqada iyo Caymiska Adeegga Caymiska ee murashaxiinta khibrada leh.
Dukumenti muujinaya xaaladda militariga.
Xusuusin: Dhammaan horumarinnada iyo ogeysiisyada ku saabsan geeddi-socodka waxaa laga heli karaa websaydhka Hay'adda (www.bilgem.tubitak.gov.tr/ http://www.tubitak.gov.tr) ayaa lagu dhawaaqi doonaa.